ရင်သွေးလေးရေ တာ့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းသာစွာပြောပြလာခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် နေတိုး See More. – Messi Club
ရင်သွေးလေးရေ တာ့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းသာစွာပြောပြလာခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် နေတိုး See More.
ရင်သွေးလေးရေ တာ့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းသာစွ ာပြောပြလာခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် နေတိုးတို့ ဇနီးမောင်နှံ့
သရုပ်ဆောင် နေတိုးကတော့ အမိုက်စား သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာ အကောင်းဆုံ းသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားပါတယ်နော်။
အခုတစ်ခါမှာဆိုရင် သရုပ်ဆောင်နေတိုးတို့ ဇနီးမောင်နှံ့က ရင်သွေးလေး ရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းသာစွာအခုလို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။ အမာခံပရိတ်သတ်တစ်ဦးက မကြာခင်ရင်သွေးလေး ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သတင်းကြားရ ကိန်းရှိတယ်ဆိုပြီး